Ikhaya | Yuyue
I-Shenzhen Yuyue Electronic Technology Co, Ltd.
Thayipha Isiteshi Sokudonsa Ngohlobo oluthile
Ikhebuli ye-HDMI HD
Ukuvumelanisa okulalelwayo kwe-4K HD nevidiyo.
Izibophezele ekuhlinzekeni abasebenzisi ngezisombululo zokuthola izinto ezidijithali eziyindilinga. Imikhiqizo ifaka uchungechunge lokunwetshwa kwekhompiyutha, uchungechunge lokudluliswa kwengqimba ephathekayo, uchungechunge lokudluliswa kwedijithali, USB2.0 / 3.0 / 3.1 uchungechunge lokudlulisa lwe-usb-c, uchungechunge lokudluliswa kwe-SlimPort, uchungechunge lokusabalalisa lwe-HDMI, njll.
Intengo ye-USB Light Hanging Neck USB Charging Mini Fan
Intengo ye-Mini Light Hanging Neck USB Charging Mini Fan I-USB ekhokhelwa nge-USB Light Lazy Hanging Neck Fan Izandla Eziphathekayo I-Neckband Sports Fan Yokuhamba Amatende 2000mAh Ibhethri elishajekayo: Inganikwa amandla futhi ivuselelwe ngawo wonke amadivayisi we-5V okukhipha i-USB (njengamabhange kagesi, amakhompyutha, njll.). Uma isishajwe ngokugcwele, ibhethri lingasebenza amahora angu-2-8. 3 Isivinini Esishintshekayo: Izilungiselelo ezisezingeni eliphansi / eziMaphakathi / eziPhezulu zihlangabezana nezidingo zakho ezahlukahlukene zejubane lomoya. Ijubane lomoya eliphakeme kakhulu lishaya umoya ngo-5.9M / S! Isici: 1. Idizayini Yesandla Namahedfoni: Uma uhamba, nakanjani awufuni ukubamba ifeni, idizayini eyingqayizivele yamahhala neyakhelwe ngehedfoni, ngaleyo ndlela ungakwazi ukulengisa isithandwa entanyeni yakho. 2. I-LED + 360 ° i-Double Fan eguquguqukayo, epholile kabili: Ngemodi eguquguqukayo ye-LED, Ifanele ezemidlalo / ukufundwa ebusuku.Leli fan le-neckband lingaguquguqula kalula isiqondiso esingu-360 °, Esikuvumela ukuthi uthole isiqondiso somoya esifanele kakhulu. 3. Izinga Lesivinini Eliguqulwayo: I-fan blade idizayini enamaqabunga ayisikhombisa, umoya unamandla amakhulu. Abalandeli abaningi emakethe baklanyelwe ngamakhasi amaqabunga amathathu.Umoya mncane kakhulu futhi umsindo ophansi.Lesi fan esinomuntu siqu esinamandla sinamazinga wezivinini eziphansi / eziphakathi / eziphakeme ezi-3. 4. I-Fan Shaableable Fan: Ibhethri le-lithium le-2000mAh elishajekayo elakhelwe ngaphakathi, ungashaja i-fan ngekhebula le-USB. Nentambo ye-USB eza nefeni ehambisana nanoma iyiphi imbobo ye-USB, njengekhompyutha, ama-laptops, ibhange lamandla, nesokhethi ejwayelekile njalonjalo. 5. Isicelo Esibanzi & Iwaranti: Le fan ephathekayo ilungele ukupholisa komuntu siqu, ihhovisi, imisebenzi yangaphandle, njengokukhempa, Uhambo, ukuhamba izintaba, ukukhuphuka nokubuka ezemidlalo njll. Kubantu abanezinwele ezinde, ngicela ubophe izinwele lapho ugqoke ifeni ukuvimbela ukuthi zinganyakaziswa kumlandeli. Qaphela: Iphakethe liqukethe isilawuli esishajekayo, ikhebuli yokushaja i-USB, ibhukwana lomsebenzisi, awekho amafutha / amakha abalulekile. Ngaphambi kokusebenzisa ifeni yokupholisa ye-neckband, sicela uqiniseke ukuthi ubopha izinwele ezinde ukugwema ukulimala. Incazelo yomkhiqizo: Izinto Zomkhiqizo: I-ABS Plastic ne-Silicone Usayizi womkhiqizo: 190 * 230 * 30mm Idizayini: 3 amagiya ayaguqulwa IGiya Elikhanyayo: 2 Okokufaka Okushaja: DC5V 1A Isikhathi sokushaja: 3 Hours Imodeli yebhethri: 18650-3.7V 2000MAH Imoto: DC Brushless Motor Isisindo: 185g Isitayela: I-USB Neck Hanging Fan Isipho se: Abangane (Usuku Lokuzalwa. Ukhisimusi. Ukunikezwa Konyaka Omusha) Ububanzi bokusetshenziswa: ikhaya / isikole / ihhovisi / ngaphandle Ukugcinwa komkhiqizo: Ungafaki iminwe yakho kufeni, Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6 kufanele zisizwe ngunogada. 1. Idizayini elenga: Idizayini yentambo elengayo eyingqayizivele, ehlukile kunesitayela sangaphambilini sokwakheka, idizayini yabalandeli iguquguquka kalula, ingaqhutshwa nxazonke, futhi ukukhanya okushintshayo kukwenza ubambe iso lapho ujabulela ukuphola komoya. Kumele ube nakho ehlobo Ukusetshenziswa okuguqukayo: Lo mlandeli wentamo omncane olengayo ungasongwa, ngakho-ke unezindlela ezahlukahlukene zokuwusebenzisa, ikhanda lalo fan lingaphendulwa ama-degree angama-360 (1) Ingilengiswa entanyeni (2) Shintsha isimo sayo, usibeke etafuleni bese uyisebenzisa (3) Ingasetshenziswa futhi esandleni. 3. Ijubane lomoya eliguquguqukayo: (1) Ijubane eliphansi: Umoya omnene nesipiliyoni esihle (2) Ijubane eliphakathi nendawo: Kuqabula ukuza okususa ukushisa (3) Ijubane elikhulu: Ijubane lomoya elinamandla, izikhathi ezipholile ziza kuwe 4. Izibani ze-LED zemilingo eziguqukayo: Idizayini ekhethekile yokukhanyisa kwe-LED ikuvumela ukuthi ujabulele ukuphola ngenkathi uheha ukunakwa. Kunemibala emi-4 yothingo lwenkosazana, futhi kukhona amalambu amhlophe angaguquki ukukhanyisa. Ungakhetha phakathi kwezindlela ezimbili. 5. Ifeni elishajekayo le-USB: Ukushaja okugcwele kungasebenza amahora 2-8 Kuyinto elula ukuphatha noma kuphi nanoma nini. Ukukhetha okuhle koSuku lweSikole, Isipho Sosuku Lokuzalwa.
Isisindo Esilula 3 Ku-1 Uhlobo C Olungamabhele Ukushaja I-Mini Fan
Isisindo Esilula 3 Ku-1 Uhlobo C Olufushwayo I-Mini Fan Fan Ngokwezifiso Ilogo Giveaway Mini 2/3 Ku-1 Type C Android IPhone Portable Fan For Smartphone Zonke izinhlobo zine: Izindlela zokuxhumana ze-Android, isikhombimsebenzisi se-Apple, i-Android + i-USB, i-Apple + ne-Android. Igama lomkhiqizo: 2 in1 phone mini fan / 3 in 1 phone mini fan / mini fan fan Usayizi: 9cmx3.8x4.3cm Amandla: 5V Amandla: 1W Umbala: Mhlophe, Mnyama, Bomvu, Orenji, Luhlaza, Luhlaza okwesibhakabhaka Izinto: TPE + ABS Imininingwane yePaking: Isikhwama se-PP sento ngayinye Incazelo Yomkhiqizo: Kwe-IPhone5 / 5S / SE / 6 / 6S / 6S Plus / 7/7 Plus / 8 / 8Plus / X Ye-HUAWEI / XIAOMI / BLACKBERRY / SAMSUNG / OPPO / VIVO / OnePlus Okumhlophe, oku-Orenji, okuluhlaza okotshani, okupinki, okumnyama, okuluhlaza okwesibhakabhaka, nemibala eminingi ongayikhetha 100% entsha sha nekhwalithi ephezulu sha Izinguquko zezimoto 16000 ukujika Izimoto zingasebenza ngokuqhubekayo amahora ayi-100 + TPE impahla yokuvikela imvelo Alikho ibhethri, i-USB / Micro USB / Lightning / Type-C Power Supply nje Idizayini ebunjiwe ehlukile, Futhi inesisindo esincane Umoya Onamandla, Umsindo Ophansi Nokusindisa Amandla Isikhathi sokusebenza eside esisebenzisa amandla amancane Umsindo ophathekayo, ophansi, ikhwalithi eqinisekisiwe ngempilo ende yokusebenza
I-Handheld Night Light foldable USB Shaja Mini Fan
I-Handheld Night Light foldable USB Shaja Mini Fan I-Mini Handheld Folding Night Light Fan I-USB elishajekayo ye-LED fan ngeSucker Phone Holder I-USB ephathekayo ye-Mini Mini Fans Creative Holder Sucker Fan 800mAh Ibhethri elishajekayo: Linganikwa amandla futhi livuselelwe ngawo wonke amadivayisi we-5V okukhipha i-USB (njengamabhange kagesi, amakhompyutha, njll.). Uma isishajwe ngokugcwele, ibhethri lingasebenza amahora angu-2-3. 2 Isivinini Esilungisekayo: Amasethingi wejubane elisezingeni eliphansi // ahlangabezana nezidingo zakho ezahlukahlukene zejubane lomoya. Ijubane lomoya eliphakeme kakhulu lishaya umoya ngo-5.9M / S! Isici: 1. Umlandeli ophathekayo ophethe ukuhlanganiswa komklamo, ukubukeka okulula nesakhiwo esiqinile. 2. I-fan yesilawuli eshuthekayo ye-USB enesiphathi sokugoqa inkomishi yefoni, uhlelo lokulawula oluhlakaniphile, ukusebenza okuthembekile, okusebenza ngokugcwele futhi okulula. 3. Usebenzisa ibhethri ejwayelekile yomthamo wamazwe omhlaba (Kufakiwe), engaphinde isetshenziswe futhi ikhokhiswe yishaja ye-USB, ikhompyutha namandla asebhange. 4. Idizayini ehlukile ephathekayo yabalandeli, isitayela sokudala, esenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-ABS + Silicone, inesakhiwo esiqinile nengcindezi. 5. Isivinini samandla esisheshayo samandla amaningi, cisha noma cisha umoya ngobuchwepheshe bejubane obuguquguqukayo, esebenza kahle futhi wonge amandla. 6. Umshini we-USB ongabuyekezwa: Ibhethri le-lithium elishajekayo elakhelwe ngaphakathi elingu-800mAh, ungashaja umlandeli ngekhebula le-USB. Nentambo ye-USB eza nefeni ehambisana nanoma iyiphi imbobo ye-USB, njengekhompyutha, ama-laptops, ibhange lamandla, nesokhethi ejwayelekile njalonjalo. Qaphela: Iphakheji iqukethe iswidi yesilawuli esishajekayo, ikhebula lokushaja le-USB, ibhukwana lomsebenzisi, awekho amafutha / amakha abalulekile. Ngaphambi kokusebenzisa isiphephetha-moya, sicela uqiniseke ukuthi ubopha izinwele ezinde ukugwema ukulimala. Incazelo yomkhiqizo: Izinto Zomkhiqizo: I-ABS Plastic + Silicone Idizayini: Amagiya ama-2 ayashintshwa Okokufaka Okushaja: DC5V 1A Isikhathi sokushaja: 3 Hours Imodeli yebhethri: 18650-3.7V 800MAH Imoto: DC Brushless Motor Isitayela: I-USB Sucker Fan Enesiphathi Sefoni Isipho se: Abangane (Usuku Lokuzalwa. Ukhisimuzi. Ukunikezwa konyaka omusha) Ububanzi bokusetshenziswa: ikhaya / isikole / ihhovisi Ukugcinwa komkhiqizo: Ungafaki iminwe yakho kufeni, Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6 kufanele zisizwe ngunogada.
Isiphathi Socingo Esitholakalayo 2000 Fan
Isiphathi Socingo Esitholakalayo 2000 Fan I-USB ephathekayo yeDeski elishajekayo enesibambi sefoni esitholakalayo esingaphakathi kwendlu 2000mAh Ibhethri elishajekayo: Inganikwa amandla futhi ivuselelwe ngawo wonke amadivayisi we-5V okukhipha i-USB (njengamabhange kagesi, amakhompyutha, njll.). Uma ishajeke ngokugcwele, ibhethri lingasebenza amahora angu-2-6.5 3 Isivinini Esilungisekayo: Amasethingi asezingeni eliphansi / aphakathi nendawo / aphezulu ahlangabezana nezidingo zakho ezahlukahlukene zejubane lomoya. Ijubane lomoya eliphakeme kakhulu lishaya umoya ngo-5.9M / S! Isici: 1. fan ephathekayo ephathekayo ngokuhlanganiswa komklamo, ukubukeka okulula nesakhiwo esiqinile. 2. Umshini wedeski elishajekayo we-USB onesiphathi sefoni esikhiphekayo, isistimu yokulawula ehlakaniphile, ukusebenza okuthembekile, okusebenza ngokugcwele futhi okulula. 3. Usebenzisa ibhethri ejwayelekile yamazwe omhlaba i-lithium battery (Ngaphandle), engaphinde isetshenziswe futhi ikhokhiswe yishaja ye-USB, ikhompyutha namandla asebhange. 4. Idizayini ehlukile ephathekayo yabalandeli, isitayela sokudala, esenziwe nge-high quality ABS, inesakhiwo esiqinile nengcindezi. 5. Isivinini samandla esisheshayo samandla amaningi, cisha noma cisha umoya ngobuchwepheshe bejubane obuguquguqukayo, esebenza kahle futhi wonge amandla. 6. I-Fan Shaableable Fan: Ibhethri le-lithium le-2000mAh elishajekayo elakhelwe ngaphakathi, ungashaja i-fan ngekhebula le-USB. Nentambo ye-USB eza nefeni ehambisana nanoma iyiphi imbobo ye-USB, njengekhompyutha, ama-laptops, ibhange lamandla, nesokhethi ejwayelekile njalonjalo. Qaphela: Iphakethe liqukethe isilawuli esishajekayo, ikhebuli yokushaja i-USB, ibhukwana lomsebenzisi, awekho amafutha / amakha abalulekile. Ngaphambi kokusebenzisa umshayeli wedeski, sicela uqiniseke ukuthi ubopha izinwele ezinde ukugwema ukulimala. Incazelo yomkhiqizo: Izinto Zomkhiqizo: I-ABS Plastic Idizayini: 3 amagiya ayaguqulwa Okokufaka Okushaja: DC5V 0.8A Isikhathi sokushaja: 2.5 Hours Isikhathi sokusebenza: isivinini esiphansi, 6.5hours, isivinini esiphakathi, amahora we-3.5, isivinini esiphakeme, amahora ama-2 Imodeli yebhethri: 18650-3.7V 2000MAH Imoto: DC Brushless Motor Isitayela: I-USB Desk Fan Enesiphathi Sefoni Esitholakalayo Isipho se: Abangane (Usuku Lokuzalwa. Ukhisimuzi. Ukunikezwa konyaka omusha) Ububanzi bokusetshenziswa: ikhaya / isikole / ihhovisi Ukugcinwa komkhiqizo: Ungafaki iminwe yakho kufeni, Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6 kufanele zisizwe ngunogada.
Inkampani yethu izinikele ku-R
& Imikhiqizo ye-D, yanelisa isidingo amakhasimende ethu.
Ukuqinisekiswa kwekhwalithi yomkhiqizo wethu kuyizinyanga eziyi-12.
Ithimba lethu lenkonzo lizophendula umbuzo wakho kungakapheli amahora ama-2.
Ifektri yemitha engama-squre angaphezu kwenkulungwane, abasebenzi abangaphezu kwamakhono angama-50, imigqa emi-2 yomhlangano, imishini emisha yokufaka inaliti, isethi emibili yomshini ophakeme kakhulu, isethi eyodwa yomshini wokukhipha, isethi engu-2 yembiza yokuphehla, nomshini wokudonsa wedijithali ohlakaniphile , I-stripper ye-pneumatic. Njalo ngenyanga kudlula amayunithi angama-30,000.
IShenzhen Yuyue Electronic Technology Co, Ltd eyasungulwa ngonyaka we-2009, ekhethekile USB HUB, TYPE-C Docking Station
& Isixhumo senethiwekhi
& Inethiwekhi Adapter.Over isipiliyoni seminyaka engu-11 yokukhiqiza, sesibe ngumenzi omkhulu kulo mkhakha.
Kuyibhizinisi eliphezulu lobuchwepheshe elihlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa. Izibophezele ekuhlinzekeni abasebenzisi ngezisombululo zokuthola izinto ezidijithali eziyindilinga. Imikhiqizo ifaka uchungechunge lokunwetshwa kwekhompiyutha, uchungechunge lokudluliselwa kwengoma ephathekayo, uchungechunge lokudluliswa kwedijithali, USB2.0 / 3.0 / 3.1 usb-c uchungechunge lokudlulisa, uchungechunge lokudluliswa kwe-SlimPort, uchungechunge lokusabalalisa lwe-HDMI, njll.
UMA UNEMIBUZO EMINYE, BHALISA KUSITHI